Sekuyacaca ukuthi kumele ngingene enkundleni ngidlale - Benni | isiZulu
Kumele ngabe kade aya e-Europe uDolly - Benni
Cape Town - Umqeqeshi weCape Town City uBenni McCarthy usesabise ngokuthuntutha amakhokho akhe abuyele ensimini uma abagadli bekilabhu bengawanyusi amasokisi emidlalweni yemiqhudelwano neyeligi.
UMcCarthy uthi liyamnenga irekhodi elingelihle lamaCitizens elitshengisa ukuthi asavalele amagoli ayisikhombisa nje kuphela emidlalweni eyishumi yokugcina kuyona yonke imiqhudelwano, yize ikilabhu ihlezi endaweni yesithuba kumaqembu e-Absa Premiership.
Nokho, iCity ikwazile ukudlulela emzuliswaneni olandelayo we-CAF Confederation Cup kulandela ukushaya ngo-1-0 iYoung Buffaloes yaseSwazini.
Yize kunjalo uMcCarthy, owake wadlalela iBafana Bafana ngezinsuku zakhe, akajabule ngendlela ezakhe ezidlala ngayo ngamathuba eziwatholayo.
"Angazi noma kufanele ngiyozinciphisa umzimba yini ukuze ngikwazi ukubuyela ebholeni ngidlale. Mhlawumbe lokho kungaba yiqhinga elihle ngoba abanye babadlali bangahlambalazwa yindoda endala eneminyaka engu-40 ubudala ngokuthi ithathe indawo yabo bese yenza umsebenzi oncomekayo kunabo," kusho uMcCarthy etshela izintatheli.
"Angingabazi ukuthi ngingenza into ecokeme kunabanye bala badlali. Hhayi ngoba ngibabukela phansi abadlali bami, kepha le nto isiphenduke insakavukela umchilo wesidwaba - manje angisazi sekumele ngikhulume kanjani."
Uthi akukho abangakwenzi ejimini ukuqinisekisa ukuthi bacija abagadli, kodwa akazi ukuthi kuvele konakalephi uma sebengene enkundleni.